पारोली रणनीति - UK 2021 ✅
प्रत्यक्ष क्यासिनो २०२१
कसरी बकार्याट खेल्ने
ब्याक्र्याट शर्त प्रणाली
Blackjack कसरी खेल्ने
ब्ल्याकज्याक कार्ड गणना
मार्टिale्गेल रणनीति ओड्स
टेक्सास होल्डम कसरी खेल्ने
टेक्सास होल्डम शुरुआतीहरूको लागि
टेक्सास होल्डम हात
टेक्सास होल्डम रणनीति
टेक्सास होल्डम ओड्स
तीन कार्ड पोकर
द्रुत भुक्तान क्यासिनो
Home » क्यासिनो खेलहरू » रूलेट » पारोली रणनीति
प्रत्येक खेलाडीले पारोली रणनीतिको बारेमा के थाहा पाउनुपर्दछ?
यहाँ छ तपाईं कसरी पारोली खेल्न सक्नुहुन्छ
रूलेटका लागि पारोली प्रणालीका पेशेवरहरू र विपक्षहरू के हुन्?
खेलाडीहरू द्वारा नियोजित अधिकांश रूलेट रणनीतिहरू घाटा पुन: प्राप्ति गर्नुको सट्टा विजेता रेखामा फोकस गर्दछन्। यो एक नै लोकप्रिय मार्टिale्गेल र फिबोनैची रणनीतिहरूबाट अपेक्षा गर्न सक्दछ जुन आकस्मिक र जोखिम-बिरूद्ध खेलाडीहरूको लागि काम गर्दछ। तर त्यहाँ अर्को रणनीति छ कि बोल्ने र रूलेट – पारोली रणनीति को लागी एक साहसी र चाखलाग्दो दृष्टिकोण ले।
धेरै स्रोतहरुका अनुसार यो रणनीति ‘पारोली’ नाम गरेको व्यक्तिलाई श्रेय दिइन्छ, र यो पहिलो १ during को समयमा प्रयोग भएको थियो th शताब्दी। सुरुमा, यो पहिलो पटक ‘Basset’ भन्ने कार्ड गेममा प्रयोग गरियो जुन इटालीमा लोकप्रिय थियो। रणनीति यस सिद्धान्तमा आधारित छ कि घाटा र जीत जहिले पनि धारहरूमा हुन्छन्। यसको मतलव त्यहाँ त्यस्तो समय आउनेछ जब क्यासिनो तालिका ‘तातो’ हुन्छ जुन जीतलाई दिन उदार हुन्छ, र कहिलेकाँहि जीत विरलै हुन्छ, ‘चिसो’। परोली रणनीतिमा, तपाईं तालिका तातो स्ट्रीकमा हुँदा अधिक पैसा खर्च गर्नुहुन्छ र चिसो हुँदा बेट्सलाई सीमित गर्नुहुन्छ।
यो एक रौलेट रणनीति अपनाउन को लागी एक सरल रणनीति हो र शर्त विकल्प मा पैसा राख्नु पर्छ अनौठो / सम र रातो / कालो जस्तो। सुरु गर्नको लागि, तपाईंले पहिले बेस स्ट्याक पहिचान गर्नु पर्छ जुन तपाईं खेल्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईं जहिले रूलेट टेबुलमा हराउनुहुन्छ भने, तपाईंको सफल शर्त तपाईंको मनपर्ने आधार हिस्सेको बराबर हुनुपर्छ।
तर यदि तपाइँ खेल जित्न सफल हुनुभयो, रणनीतिले तपाइँको हिस्सेदारी दोहोर्याउन केही बिन्दु मा कल गर्दछ कि तपाइँले तपाइँको मूल र आधार हिस्सेदारी फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्नेछ यदि तपाइँ अझै पनि एक विजयी स्ट्रीकमा हुनुहुन्छ भने। त्यो क्षण जब तपाईं आफ्नो बेस ब्याज फिर्ता गर्न लाग्नुहुन्छ अन्तमा प्लेयरको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ।
रूलेटका लागि पारोली राम्रोसँग बुझ्नको लागि यहाँ आधारभूत उदाहरण छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् तपाइँले १ शर्त एकाईलाई आधार बेसको रूपमा निर्णय गर्नुभयो। यदि तपाईं यो शर्त खेल्नुभयो र हराउनुभयो भने, अर्को ब्याज प्रारम्भिक शर्त (२ शर्त एकाइहरू) लाई डबल गर्नुपर्छ। यदि अर्को खेलमा तपाईं फेरि जित्नुभयो भने, पारोली प्रणालीले सुझाव दिन्छ कि तपाईंले फेरि शर्त दोब्बर गर्नु पर्छ (bet शर्त युनिटहरू)।
माथिको उदाहरणमा, तपाईं कसरी यो पक्का गर्नुहुन्छ कि यो रोकिने समय हो र बेस हिस्सेमा फिर्ता फिर्ता उल्टाउनुहोस् यदि तपाईं अझै जित्दै हुनुहुन्छ भने पनि? यदि तपाईंले सफलताका साथ आफ्नो बाजी दुई पटक दोब्बर गर्नुभयो भने, त्यसो गर्न रोक्न र १ शर्त एकाइमा फिर्ता जानको लागि यो राम्रो समय हो। अवश्य पनि, परोली प्रणाली अत्यधिक लचिलो छ, र तपाईले सधैं आफ्नो बाजी बढाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईले दुई पटक भन्दा दोब्बर हिस्सेदारी गर्नुभयो।
पारोली प्रणालीको साथ, तपाईंको बैroll्करोल वास्तवमा खतरनाक गुम्ने स्ट्र्याकहरूबाट सुरक्षित छ। यहाँ, खेलाडीहरूले एक ब्याट राख्दैनन् जुन base गुणा बढी प्राथमिक बेस स्टेक भन्दा बढी छ। छोटकरीमा, खेलाडीहरूले घाटालाई काट्न र पुन: प्राप्ति गर्न पैसा जोखिममा पार्दैन। यो रणनीति को साथ समस्या यो छ कि जब तपाईं दोगु हिस्सा लागी, त्यहाँ जोखिम पनि छ कि विजयी लहर भाँचिनेछ। रौलेटको लागि पारोली प्रणाली खेल्दा खेलाडीहरूले ठूलो जीतको आशा गर्न सक्दैनन्।
पारोली रणनीति एक लोकप्रिय शर्त दृष्टिकोण हो जुन रूलेट खेल्दा प्रयोग गरिन्छ
यो शर्त प्रणाली एक उल्टे मार्टिaleिंगल को रूप मा परिचित छ, जहाँ खेलाडीहरु केवल हारहरु लाई पछ्याउनुको सट्टा स्ट्रिकहरु जित्ने मा केन्द्रित छन्।
यो दृष्टिकोण सिद्धान्तमा आधारित छ कि रौलेट तालिकाहरूमा तातो र चिसो रेखाहरू छन्। खेलाडीहरूले तातो टेबुलमा बढी शर्त लगाउनु पर्छ र टेबलमा ब्याजर्स सीमित गर्नु पर्छ जुन यस समयमा धेरै तिर्दैन
परोलीमा, खेलाडीहरूले पहिला बेस स्ट्याक पहिचान गर्नुपर्दछ र यसलाई पहिलो खेल खेल्न प्रयोग गर्नुहोस्। जब खेलाडीहरू हराउँछन्, तिनीहरूले बेस दांव लगाउनुपर्दछ र जब उनीहरू जित्छन्, अन्तिम स्टक दोब्बर बनाउनुपर्नेछ
Alternative Languages: English Français Albanian Հայերեն Azərbaycan Euskara Català 简体中文 Galego Íslenska македонски Mongolian Nepali Русский Somali Türkçe Uzbek Cymraeg Zulu
© 2022	UK 2021 ✅